“Boqor Buur Madow Somaliland miyuu ka hiiliyay mise wuu u hiiliyay? | Baraarug News
Home Wararka “Boqor Buur Madow Somaliland miyuu ka hiiliyay mise wuu u hiiliyay?
“Boqor Buur Madow Somaliland miyuu ka hiiliyay mise wuu u hiiliyay?
Hargeysa(baraarugnews.net)-” .Anigu shakhsi ahaan maan sharaysan booqashada Boqor Cismaan Buurmadow uu ku tegay Muqdisho iyo Baydhaba. Qofka Hargeysa dhexdeeda ka yidhaa “Goni-isu-taaga Somaliland waa go’aan shacbi warkiisu xiiso ma leh waayo waa caadi oo war la qabaa xiiso ma leh. Balse qof caan ah oo soomaali oo dhami taqaan oo weliba hogaamiye dhaqameed ah marka inta uu Muqdisho tago ka dhex yidhaa dad badan ayay ku noqon kartaa yaab iyo yaabka-yaabkii. Mar Muqdisho ayuu tegay ayaa in badan oo caadifiyiin ah oo weliba ka soo jeeda beeshe dhexe ee Somaliland ku noqonaysa amakaag. Waayo waxay aaminsan yihiin qof caan ah oo ka soo jeeda Somaliland hadii uu Muqdishaba tegay in uu yahay dambiile khayimul waddan ah, sharcigana waxba kama gelin oo isaga ayaa sharci ah. Xagiisa sida loo kala neceb yahay Muqdisho iyo Somalia ayaa loo kala muwaadinsan yahay Somaliland. Kuwo kale oo Reer Muqdisho ama Somaliya ahna waxa yaabka-yaabkiisa ku ah ninka Hargeysa ka yimi ee ku dhici karay inta uu Muqdisho ugu yimaado si cad warbaahinta uga yidhaa “ gooni-isu-taaga Somaliland waa go’aan shacbi waanan taageersanahay”, Somaliland miyuu ka hiiliyay mise wuu u hiiliyay? Anigu waxan qabaa in uu u hiiliyay? Laakiin qofka isaguna si kale u arka waa isaga iyo garashadiisa. Kuma qoonsan karo
Somaliland loogama baran in ay farogeliso arimaha Somaliya balse madaxda iyo siyaasiyiinta Somaliya ama Xamar ha joogaan ama meelo kale eh siyaasiyiin iyo madaxba hadh iyo habeen si toos ah iyo si dadbanba arimaha Somaliland way u farogeliyaan. waanay og yihiin kuwa Hargeysa jooga ee Boqor Buurmadow ka dhigaya nin kacbadii dumiyay
Previous article“Wax danbi ah ma aanan galin. Wax siyaasad ahna kama qayb qaadan. Si fiican oo…”boqor Buur’madow
Next articleDhokomatiga Cadeymaha Dhulka Beerta Caaqil Cali Cabdi Shire Sanadka Iyo Dheeraadka Ugu Xidhan yahay Saldhiga Dhexe Ee Magaalada Hargeysa &Ma Awood Iyo Shaadh Dawladdeed Ayuu Sanad Iyo Dheeraad Ugu Jiraa Saldhiga Dhexe Ee Caasimada Somaliland?